ဖုန်းအတွက်ရေစိုခံ Touch Screen စက်ဘီးအိတ် ၀ ယ်ပါ၊ ပို့ဆောင်ခအခမဲ့၊ အခွန်မပါ | WoopShop®
ဖုန်းများအတွက်ရေစိုခံ Touch Screen စက်ဘီးအိတ်
အရောင် 017-1BK 6.0 လက်မ 017-2BK 6.0 လက်မ 017-5 6.5 လက်မ B52 ၆.၂ လက်မ 017-3BK 6.0 လက်မ 029-1BK 6.0 လက်မ B68 ၆.၂ လက်မ 029BK ၅.၈ လက်မ
မှစ. သင်္ဘောများ စပိန် ရုရှားပြည်ထောင်စု တရုတ်နိုင်ငံ ပိုလန် အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု
017-1BK 6.0 လက်မ / SPAIN 017-1BK ၆.၀ လက်မ / ရုရှား 017-1BK 6.0 လက်မ / တရုတ် 017-1BK 6.0 လက်မ / ပိုလန် 017-2BK 6.0 လက်မ / ယူအက်စ် 017-2BK 6.0 လက်မ / SPAIN 017-2BK ၆.၀ လက်မ / ရုရှား 017-1BK 6.0 လက်မ / ယူအက်စ် 017-2BK 6.0 လက်မ / တရုတ် 017-2BK 6.0 လက်မ / ပိုလန် 017-5 6.5 လက်မ / ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း 017-5 6.5 လက်မ / SPAIN 017-5 6.5 လက်မ / ယူအက်စ် B52 ၆.၂ လက်မ / စပိန် B52 ၆.၂ လက်မ / ယူအက်စ် 017-5 6.5 လက်မ / ပိုလန် 017-5 6.5 လက်မ / တရုတ် B52 ၆.၂ လက်မ / ပိုလန် B52 ၆.၂ လက်မ / တရုတ် B52 ၆.၂ လက်မ / ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း 017-3BK 6.0 လက်မ / ယူအက်စ် 017-3BK ၆.၀ လက်မ / ရုရှား 017-3BK 6.0 လက်မ / SPAIN 017-3BK 6.0 လက်မ / ပိုလန် 017-3BK 6.0 လက်မ / တရုတ် 029-1BK 6.0 လက်မ / တရုတ် 029-1BK 6.0 လက်မ / ပိုလန် 029-1BK 6.0 လက်မ / SPAIN 029-1BK ၆.၀ လက်မ / ရုရှား 029-1BK 6.0 လက်မ / ယူအက်စ် B68 ၆.၂ လက်မ / တရုတ် B68 ၆.၂ လက်မ / ပိုလန် B68 ၆.၂ လက်မ / စပိန် B68 ၆.၂ လက်မ / ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း 029BK ၅.၈ လက်မ / ပိုလန် B68 ၆.၂ လက်မ / ယူအက်စ် 029BK ၅.၈ လက်မ / ရုရှား 029BK ၅.၈ လက်မ / တရုတ် 029BK ၅.၈ လက်မ / ယူအက်စ် 029BK ၅.၈ လက်မ / စပိန်
ဖုန်း - 017-1BK 6.0 လက်မ / တရုတ်ဖုန်းများအတွက်ရေစိုခံ Touch Screen စက်ဘီးအိတ် backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
အရွယ်အစား: 20 * 8.2 * 10.3cm ခန့်
အလေးချိန်: 149g အကြောင်း
မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား: 5.8, 6.0, 6.5 လက်မ
ထူးခြားချက် - မိုးရေ၊ နားကြပ်ပေါက်၊ နေကာမျက်မှန်၊ ရောင်ပြန်
အမည်: စက်ဘီးအိတ်၊ စက်ဘီးဘောင်အိတ်၊ ထိပ်ပြွန်အိတ်
လုပ်ဆောင်ချက် - Touch Screen စက်ဘီးဖုန်းအိတ်သည် ၆.၀ လက်မရှိသည်
Fit: MTB၊ လမ်းစက်ဘီး၊ စက်ဘီး
အမည်: စက်ဘီးအိတ်၊ စက်ဘီးခွံခွံ
စွမ်းဆောင်ရည် - 1.7L အကြောင်း
ပစ္စည်း: PU+TPU Touch Screen
iPhone XR XS MAX 6.5 8 7s ကဲ့သို့ ၆.၅ လက်မအောက်ဖုန်းများအတွက်သင့်တော်သည်။
Shockproof ဒီဇိုင်းပါ ၀ င်သည်
PU Sun Visor ကိုအဆင့်မြှင့်ပါ
အာရုံခံနိုင်စွမ်းမြင့်မားသော Touch Screen & Sun Visor
ကြီးမားသောစွမ်းဆောင်ရည် & အံ့သြဖွယ်လိုက်ဖက်မှု
TPU + Composite Carbon Polyester ပစ္စည်း
3 Hook System ကိုလွယ်ကူစွာတပ်ဆင်ခြင်း
အတိုင်းအတာ: 8.15 * 3.74 *5လက်မ (20.7 * 9.5 * 12.7 cm)
အလေးချိန်: ၀.၃၃ ပေါင် (၀.၁၅ ကီလိုဂရမ်)
Sun Visor: ဒါဟာမင်းရဲ့ဖုန်းကိုနေရောင်ပြန်ဟပ်မှုကနေကာကွယ်ပေးပြီးဖုန်းသုံးနေစဉ်ဖုန်းရဲ့ display ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်သာဖို့ကူညီပေးပါတယ်။
ရေလုံ: ပေါင်းစပ်ကာဗွန် polyester polyester ပစ္စည်းများနှင့် TPU တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဤစက်ဘီးအိတ်သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောရေစိုခံစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည်။
အာရုံခံနိုင်စွမ်း TPU Touch Screen: ၀.၃ မီလီမီတာ TPU ဖလင်တွင်အလွန်ပြင်းထန်သောအာရုံခံနိုင်စွမ်းနှင့်ကြည်လင်ပြတ်သားမှုတို့ပါ ၀ င်သည်။
ကြီးမားသောစွမ်းရည် - ၁.၅ လီတာကြီးမားသောသိုလှောင်မှုပမာဏ၊ သင် CO1.5 လေထိုးစက်၊ စက်ဘီးလက်အိတ်၊ စက်ဘီးစီးမျက်မှန်၊ ကားသော့၊ ပြုပြင်ရေးကိရိယာများစသဖြင့်ထည့်နိုင်သည်။
စျေးကွက်ထဲမှာမတူညီတဲ့စက်ဘီးအိတ်အများစု၊ စက်ဘီးစီးသူတွေကစီးရတာပိုအဆင်ပြေတယ်၊ ​​စက်ဘီးစီးတဲ့အခါလွယ်လွယ်ကူကူရနိုင်ဖို့ဘေးတိုက်အဖွင့်ဒီဇိုင်းကိုငါတို့ဒီဇိုင်းလုပ်ခဲ့တယ်။
ပစ္စည်း: TPU + ပေါင်းစပ်ကာဗွန် polyester
အတိုင်းအတာ: ၈.၂၆ * ၄.၃၃ * ၅.၅၁ လက်မ (၂၁ * ၁၁ * ၁၄ စင်တီမီတာ)
ဖုန်းအိတ်အရွယ်အစား - ၆.၅ လက်မအောက်ဖုန်းများနှင့်ကိုက်ညီသည်
ကြီးမားသောစွမ်းဆောင်ရည် | အာရုံခံမျက်နှာပြင် | ပြန်လည်ဖော်ပြသောလက္ခဏာ | ရေစိုခံ | ကြာရှည်ခံသည်
ပစ္စည်း: TPU + Polyester + EVA Composite Material
အတိုင်းအတာ: ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 19.5*10.5*7.5cm
Feature: Headphone Jack ဒီဇိုင်း | ရေစိုခံဇစ် | စွမ်းရည်မြင့်
အရွယ်အစား: 19 * 9.2 * 7.5cm ခန့်
စွမ်းဆောင်ရည် - 1.3L အကြောင်း
ရေစိုခံ၊ ရေစိုမိုးကာပါ ၀ င်သည်
အင်္ဂါရပ်များ: ရောင်ပြန်မြှောင် | သံလိုက်ဓာတ်အဖုံး
104 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ် အခြေခံ.
အိတ်ကကောင်းတယ်၊ အထဲမှာအထုပ်ကြီးတွေရှိတယ်။ ပို့ဆောင်မှုမြန်သည်။ လက်ရာကောင်းတယ်။ အားနည်းချက်တစ်ခုရှိတယ်။ မိုးကြိုးပစ်သည့်နေရာများသည်လျှပ်စီးကြောင်းကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်ပါ။ သင်အဖုံးကိုပစ်ရန်အိတ်ကိုလုံး ၀ ဖွင့်ရန်လိုလျှင်ပြသနာရှိသည်။ အပြေးသမားသည်ပိတ်မိနေသည်။ ဇစ်/ဇစ်ဖြည်ရန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆွဲထုတ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဤတွင်ရွေးချယ်စရာ ၂ ခုသည်အချိန်နှင့်တပြေးညီဖွံ့ဖြိုးလာသည်သို့မဟုတ်ကွဲသည်။ အချိန်ကပြလိမ့်မယ်။
ထုတ်ကုန်သည်အလွန်ကောင်းသောပစ္စည်းဖြစ်သည်၊ ငါစက်ဘီးတွင်မတပ်ဆင်ရသေးပါ၊ ၎င်းသည်အလွန်ကြည့်ကောင်းသည်
အရည်အသွေးရှိသောထုတ်ကုန်တစ်ခု! အလွန်ကောင်းစွာပြီးစီးခဲ့သည်။ ကြီးစွာသောဝယ်ယူမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထုတ်လုပ်သူကိုဂုဏ်ယူပါတယ် !!
အရည်အသွေးနှင့်အတူပျော်ရွှင်။ ငါ့စက်ဘီးရောက်လာရင်ငါချိတ်မယ်။ woopshop ကျေးဇူးတင်ပါတယ်